Banijya News | अर्थ - Banijya News अर्थ - Banijya News
नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषणको विनिमय दरका लागि हरेक दिन बिहान १० बजे र दिउँसो २ बजे विप्रेषण विनिमय दरको रूपमा प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्र २०७६ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था र विप्रेषण कम्पनीले प्रयोग गर्ने विनिमय दरमा बैंकहरूले अन्य प्रयोजनका लागि निर्धारण गरेको विनिमय दरबाट फरेन एक्सचेञ्ज…
नेपालमा ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रियो, कुन देशबाट कति ?
साउन ८, काठमाडौं । हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुक जहाँ आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालनको अवस्था कमजोर रहेकोे छ, जसले गर्दा राजस्वका स्रोतबाट साधारण खर्च पनि धान्न नसकिने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । विकासका लागि आवश्यक पर्ने झन्डै दुईतिहाई रकम वैदेशिक सहायता र लगानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको स्थिति हेर्दा त्यति…
साउन ८, काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा सवारी कर अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने प्रणाली सुरु भएको छ। वाग्मती प्रदेश सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह तथा राजस्व भुक्तानी नियमावली, २०७८ जारी गरी यातायात व्यवस्था सूचना प्रणाली ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम...
सुनको मुल्य ३ सयले बढ्यो, कतिमा हुदैछ कारोबार ?
साउन ८, काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मुल्य बढेको छ । विहिबारको तुलनामा आज सुनको मुल्य ३०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार विहिबार प्रतितोला ९१ हजार ८०० रुपैंयामा कारोबार भएको सुन आज ९२ हजार १...
बीमा कम्पनीहरूको बीमा शुल्क २९ प्रतिशतले बृद्धि
साउन ८, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बीमा शुल्कमा २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवमा बीमा कम्पनीहरूबाट एक खर्ब ५१ अर्ब ४५ करोड ९१ लाख बीमा शुल्क सङ्कलन भएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट एक खर्ब...
भ्याक्सिन खरिदका लागि एडिबीले १९ अर्ब ६५ करोड ऋण दिने
साउन ७, काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कार्यक्रम संचालनका लागि नेपाल सरकारलाई १९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण दिने भएको छ। एडीबीले डिसेम्बर २०२० मा सार्वजनिक गरेको ९ अर्ब डलरको एशिया प्यासिफिक खोप पहुँच सुविधा...
साउन ७, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढेर बन्द भएको छ । बिहीबार १८.६७ अंकले बढेर ३ हजार ०४.३३ अंकमा पुगेको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ ४.०६ अंकले बढेर ५६२.२४ बिन्दुमा...
ग्लोबल आइएमई बैंक र अर्गानिक नेपाल सहकारीबीच सम्झौता
असार ७, काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र अर्गानिक नेपाल सहकारी संस्था लिमिटेडबीच कृषि अनुदान कर्जामा साना किसानको पहुँच बढाउने प्रयोजनार्थ सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज...
Page 1 of 2321234Next ›Last »